परमेश्वरले यो देख्नु भयो कि यो राम्रो थियो ब्रह्माण्डको लागि भगवानको प्रेम हारून यूसुफ Hackett | धर्मशास्त्र | ०//१//२०२० | Lost Sheep for Christ
परमेश्वरले कुनै चीजबाट केही बनाउनु भएन
क्याथोलिक चर्च सीसीसीको क्याटेकिजमको पृष्ठका पृष्ठहरूबाट २ God “ ईश्वरको अभिलाषा मानव हृदयमा लेखिएको छ किनकि मानिस परमेश्वर र परमेश्वरबाट सृष्टि गरिएको हो; र मानिस आफैंमा आफैंलाई आकर्षण गर्न कहिल्यै रोक्दैन। केवल भगवानमा उसले सत्य र खुशी पाउन सक्दछ उसले खोज्न कहिल्यै रोक्दैन:
मानिसको मर्यादा सबैभन्दा माथि छ कि उहाँ परमेश्वर संग कुराकानी गर्न बोलाइएको छ। परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने यो निमन्त्रणा मानिस बनिए पछि सम्बोधन गरिएको छ। किनकि यदि मानिस अस्तित्वमा छ भने यो हो कि परमेश्वरले उसलाई प्रेम मार्फत सृष्टि गर्नुभयो, र प्रेम मार्फतले उहाँलाई अस्तित्वमा राख्दछ। उहाँ सत्यको आधारमा पूर्ण रूपमा बाँच्न सक्नुहुन्न जबसम्म कि उसले स्वतन्त्र रूपमा प्रेमलाई स्वीकार गर्दैन र आफूलाई आफैंलाई आफ्नो सृष्टिकर्तामा सुम्पन्छ । ”
भाइहरू र बहिनीहरूले हामीलाई सर्वशक्तिमान परमेश्वरलाई महिमा दिन दिनुहोस्, जो सृष्टिका सबैसँग यस्तो मिठास बाँड्न चाहानुहुन्छ! हामी कत्ति धेरै रमाइलो र सुअवसर पाएका छौं, उसले हामीलाई दिने मिल्क र हनीमा रमाउन। उहाँ हामीलाई सृष्टि गर्नुभन्दा पहिले संसार विशाल र शून्य थियो । हाम्रो म व्यक्तिगत जो परमेश्वर, मायालु स्वीकार मास्टर शिल्पकार अवस्थित मा सिर्जना सबै रूपमा ence । कसरी यस्तो अस्तित्व थाहा हुन सक्छ जहाँ शुरू गर्न? उसलाई कसरी दुधहरू बनाउने उपायहरू थाहा थियो? उसले कसरी पृथ्वीलाई पानीबाट अलग गर्ने थियो? सूर्य र चन्द्र बनाउने? यो केवल केहि बाट भएको हुन सक्दैन। केहि कसरी आफैलाई बनाउन सक्दैन? सेन्ट थोमस Aquinas ठेगाना को आफ्नो लेखन यो मुद्दा Summa Theologiae Art.1, Obj 1 ” यो कि जस्तो थियो सिर्जना केही देखि केहि गर्न छैन। अगस्टिनका लागि यसो भनिएको छ: “वास्तवमा के थिएन भनेर चिन्ता गर्नलाई; तर सृष्टि गर्नु भनेको पहिलेदेखि नै केहि बनाएर बनाउनु हो। ” भगवानले मेरो दिमागले सपना देख्न सक्नेभन्दा पनि ठूलो कुरा ल्याउनुभयो, स्वर्गदूतहरू जसले उहाँ सृष्टि गरेका सुन्दरतालाई बुझ्न सक्छन्। यस्तो सुन्दर संसारको खोजी र ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ताको सुनुवाईको आश्चर्यकर्म “र उनले भने कि यो राम्रो थियो”!
“यो राम्रो थियो ” भन्दै भगवानको महत्त्व , ब्रह्माण्डका मास्टरले कुनै कुरा सिद्ध्याउँदैन जो सिद्ध छैन, उसले कुनै पनि “बाँकी भागहरू” बाट केही पनि गर्दैन। तपाईं, म, माछा जुन तपाईंले इन्डोनेसियाको आसपास जाभा समुद्रको किनारबाट लिनुहुन्छ वा बालीहरू जुन तपाईं रियाधको महान शहरको बाहिर उठाउँनुहुन्छ, जैतूनका रूखहरूबाट जुन तपाईंले यरूशलेम बाहिर कटनी गर्नुहुन्छ, सबै थोक बनाइएको थियो। र यो बनाइरहनु जारी छ परमेश्वरको दृष्टिमा उत्तम छ। लागि पनि परमेश्वर आफैले नौकरी जवाफ दिए,
“ज्ञान नभएको शब्दले सल्लाहलाई अँध्यारो पार्ने यो को हो? एउटा कम्मर कस्नु जस्तै एउटा मानिस, म तिमीलाई सोध्ने छु।
“जब मैले पृथ्वीको जग बसाएँ, तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो? मलाई भन, यदि तपाईसँग समझ छ भने। कसले यसको नाप निर्धारण गर्‍यो – निश्चित छ! वा कसले यसमा लाइन फैलायो? यसको आधारहरूमा कुन डूब्यो, वा यसको आधारशिला कसले राख्यो, जब बिहानको तारा एकसाथ गाए, र सबै परमेश्वरका छोराहरू खुशीका साथ कराए?
“समुद्रबाट ढोका बन्द गर्नेहरू जब गर्भदेखि बाहिर निस्कन्छन्। जब म बादल यसको लुगा, गरे र बाक्लो अन्धकार यसको swaddling दल, र यसको लागि निर्धारित सीमा, र सेट बारहरू र ढोका, र भन्नुभयो, ‘त्यसैले टाढा तपाईं आउन गर्नेछु, र कुनै टाढा, आफ्नो गर्व छालहरू बसे गरिनेछ र यहाँ’?
परमेश्वरको महानता यस संसारको सबै धनी भन्दा परेको छ र पृथ्वीमा हिंडेका कुनै पनि मानव राजा भन्दा महान छ। उनको प्रेमको लागि आगो मानिस मानिसहरुको हृदय जलाउँछ। उसको त्यो प्रेम बाँड्न उसको चाहना नै यही हो किन उसले सबै चीज बनायो। सेन्ट थॉमस अक्विनसले फेरि यो कुरा पुष्टि गर्दछ कि “ हामीले कुनै विशेष व्यक्तिको उत्पत्ति केवल खास एजेन्टबाट मात्र गर्नु हुँदैन, तर सबैको सृष्टि पनि ब्रह्माण्डको कारणबाट हुनुपर्दछ, जुन ईश्वर हुनुहुन्छ; र यो emanation हामी रचना को नाम बाट डिजाईन। अब के खास इमान्सनेशनले अगाडि बढ्छ , त्यो पनी ईमान्देशको लागि होईन; जब मानिस उत्पन्न हुन्छ, उहाँ पहिले हुनुहुन्नथ्यो, तर मानिस “मानव होइन,” र “सेतो” “सेतो” बाट बनाइएको हो। तसर्थ यदि सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको उत्पत्तिलाई पहिलो सिद्धान्तबाट विचार गरिएमा कुनै पनि अस्तित्वलाई यस इमान्न्सन हुनु भन्दा अगाडि अनुमान गर्नु सम्भव छैन। कुनै चीजको लागि कुनै अस्तित्व जस्तो छैन । त्यसकारण कुनै मानिसको पुस्ता “नहुने” बाट आएको हो जुन “मानव होइन”, तसर्थ सृष्टि, जुन सबैको मुक्ति हो, “नहुने” हो जुन “केहि” हुँदैन।] हामी सबै मेरा भाइबहिनीहरू उहाँ द्वारा अचम्मका साथ बनेका थियौं। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईंको पार्थिव आमा र बुबा, तपाईंलाई समातेर, तपाईंको वरिपरि सुन्दर कम्बल र्याप छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्। कसरी उनीहरू तपाईंको मुस्कान र ती ठूला, सुन्दर आँखाहरू कदर गर्दछन्। कसरी उनीहरू तपाईंको अनुहारमा हेर्छन्, तपाईंको टाउकोको आकार। आलिंगन त्यो सानो शरीर र तिनीहरूको भित्री प्रकृतिमा, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं सुरक्षित र रक्षा हुनुहुन्छ। अब भगवानलाई कल्पना गर्नुहोस्, कसरी कसैले पनि अनुहार देखेको छैन, तर उसले तपाईंलाई आफ्नो दिमागमा बनायो। उहाँले प्रकारको तपाईं दिन शरीर, त्यो भन्दा राम्रो उपहार थियो के थाह को आफ्नो मन मा प्रत्यारोपण गर्न। यी सुविधाहरू मध्ये सबैभन्दा, सुन्दर आत्मा उसले बनाएको हो। यो आत्मा एकदम बहुमूल्य छ कि उसले बनाएको कुनै पनि ढु stone्गा। यो सार हो जुन तपाईंको शारीरिक शरीरलाई जीवनमा ल्याउँछ। यसले तपाईंको व्यक्तित्व, तपाईंको हाँसो र मानव व्यक्तिको चरित्र दिन्छ। “त्यसपछि परमेश्वरले देखि धूलो को मानिस गठन जमीन, र आफ्नो nostrils जीवनको सास मा प्रेरणाबाट; र मानिस जीवित प्राणी भयो। परमप्रभु परमेश्वरले अदन नाउँ भएको ठाउँमा पूर्वपट्टि एउटा बगैंचा बनाउनु भयो। त्यहाँ उसले बनाएको मानिसलाई त्यहाँ राख्यो। “ ] उही आत्मा जुन शून्य र अन्धकारमा पानीमा डुबायो, ती जीवित आत्माको आत्मा हुनुहुन्छ जसले हामीलाई उहाँको स्वरूपमा र उहाँमा आनन्दित हुनको लागि बनाउनुभएको हो। एक व्यक्तिगत सेकेन्डको लागि यसको बारेमा सोच्नुहोस्। भगवान हामीलाई चाहिएको थिएन। उसले आफ्नो सृष्टिको आनन्द लिनको लागि कसैलाई पनि सिर्जना गर्नुपर्दैन। उसले हामीविना काम गर्न सक्थ्यो र उसको उत्कृष्ट कृतिमा शान्तिमा रहन सक्छ । तर ऊ आफ्नो आनन्दमा कोही बाँड्न चाहन्छ। जब तपाईं पदोन्नति हुन्छन्, जब तपाईं पहिलो सन्तान हुनुहुन्छ, जब तपाईं पहिलो पटक म तपाईंलाई माया गर्छु भन्दछु, तपाईं पहिलो विवाह गर्दा, तर यो आनन्द एक अनन्त उच्च छ, यो शुद्ध र धेरै मीठो छ। तर यो “मह” मात्र चख्दछ, जब हामी स्वर्ग पुग्छौं र बीटिएफिट भिजनमा उहाँको सामर्थ्य उपस्थितिमा हुन्छौं । हामीलाई हाम्रो समय, प्रतिभा र खजाना बर्बाद गरौं। हाम्रो हेरचाहमा रहेका पशुहरू र बोटबिरुवाहरू दुरुपयोग नगरौं। हामीलाई कुनै गरौं टी हानि वा, एक अर्को चोट लाग्नु हामी जीवित परमेश्वरको सबै छोराछोरी छन् लागि। आउनुहोस्, रमाऔं र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएका उपहारको लागि कृतज्ञ हुन।
यस भनाइलाई एक अद्भुत मानिसबाट विचार गर्नुहोस् जुन भगवानको कृपाले छोयो।
“परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र रूपमा सृष्टि गर्नुभयो ताकि हामी यो जीवनमा उहाँलाई चिन्न, प्रेम गर्न र उहाँको सेवा गर्न सक्दछौं र उहाँसँग सदासर्वदा खुशी रहन सक्दछौं। हामीलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरको उद्देश्य हामीबाट पृथ्वीमा यहाँको प्रेम र सेवाको प्रतिक्रिया लिनु हो, ताकि हामी उहाँसँग स्वर्गमा अनन्त आनन्दको लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछौं।
यस संसारमा भएका सबै थोक परमेश्वरका वरदान हुन्, जुन हाम्रो लागि सृष्टि गरिएको हो, जसको माध्यमबाट हामी उहाँलाई अझ राम्ररी चिन्न सक्दछौं, उहाँलाई अझ राम्ररी प्रेम गर्न सक्छौं, र अझ विश्वासीपूर्वक उहाँको सेवा गर्न सक्छौं।
नतिजा स्वरूप, हामीले भगवानका यी उपहारहरूको मूल्यांकन र प्रयोग गर्नुपर्दछ किनकि यसले हामीलाई मायालु सेवा र परमेश्वरसँग मिल्ने हाम्रो लक्ष्यतर्फ मद्दत गर्दछ। तर कुनै पनि सृष्टि गरिएका चीजहरूले हाम्रो लक्ष्यतर्फ हाम्रो प्रगतिमा बाधा पुर्‍याउने क्रममा हामीले त्यसलाई जान दिनुपर्दछ। ”
– लोयोलाको सेन्ट इग्नाटियस
धन्यबाद र भगवान आशीर्वाद तपाईं मा आउन र तपाईं आफ्नो शान्ति दिन सक्छ!
आरोन जोसेफ ह्याकेट
 क्याथोलिक चर्च CCC27 को Catechism
] काम 38 38: १-११
] Summa Theologiae प्रश्न 45 45, उत्तर दिनुहोस्
] उत्पत्ति २: –8
← و خدای ولیدل چې دا ښه وه د کائناتو سره د خدای مینه هارون جوزف هیکټټ | الهولوژي | 04/14/2020
ထိုအမှုအရာကောင်းသည်ကိုဘုရားသခင်မြင်တော်မူ။ ၊ စကြ ၀ FORာကိုဘုရားသခင်ချစ်မြတ်နိုးသည် အာရုန်သည်ယောသပ်သည် Hackett | ဓမ္မ | 04/14/2020 →